John Michael Osbourne, Ozzy Osbourne, heesaha
Ozzy Osbourne(ku dhashay sidaJohn Michael Osbourne, 3. December 1948 Aston, Birmingham) waa fannaanad ka tirsan kooxda birta adag ee Britishka Black Sabbath, oo ka kooban Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler iyo Bill Ward. Laga soo bilaabo 80. duulimaad 20. qarnigii wuxuu ku shaqeeyaa kali ah oo ganacsi ahaan xitaa ka guuleysta kooxda Black Sabbath. Waxa uu ka mid yahay kuwa ugu caansan, laakiin sidoo kale heesaha dhagaystayaasha ugu murugsan ee hadda.
Sharon oo ay weheliso xaaskiisa labaad, Sharon wuxuu qabanqaabiyaa xafladaha caaga Ozzfest sanad kasta. Waxay leedahay shan carruur ah - Jessica (1972), Louise (1975), Aimee (1983), Kelly (1984) iyo Jack (1985).
Osbourne wuxuu ku dhashay Birmingham, Aston, England. Aabihiis John Thomas "Jack Osbourne (1915-1977) wuxuu shaqeeyay habeenkii isbeddelka iyada oo ah qalab wax lagu dhisay shirkadda General Electric Company.Hooyadiis, Lillian, waxay ahayd a Catholic Catholic oo aan qancin, oo ka shaqeeyay warshad wareegga subaxdii.Osbourne wuxuu ahaa kii afraad ee lix carruur ah, wuxuu lahaa saddex gabdhood oo waawayn iyo labo walaalood ah, Jean, Iris, Gillian, Paul, iyo Tony. Qoyska waxay ku nooshahay guri yaryar oo labo qol ah oo ku yaala Xaafada Road ee Aston. Magaca naaneyska "Ozzy" wuxuu ka yimid dugsiga hoose.
Macluumaadka la xidhiidha ayaa sidoo kale laga heli karaa qoraalka Sabbath SABABTA.
1970, kooxdii Sabtida ahayd ee Sabbath ayaa sii daayay albaab la magac baxday oo la mid ah sanadkaas. Iyadoo Sabtida Black Sabbath, uu sii daayay wadarta diiwaanada 10 ee lagu iibiyay adduunka oo dhan 100 million nuqulo maanta. Maalinta sabtida ah ee madow waxay qaadatay dhowr dal oo dunida ah. 1974, waxay ku ciyaarayeen California Jam ka hor taageerayaasha 250 000.
Ozzy Osbourne ee Cardiff, 1981
1979, wuxuu ku socday wadada bidix. In 1981 uu sii daayay albumkiisa ugu horeeyayBlizzard of Ozz. Albaabka ugu dambeeyay wuxuu gaaray afar saxan Platinum Platinum. Intii lagu guda jiray 1980-yadii wuxuu sii daayay todobo album, mid waliba iibiyay sheyga 2. On the track solo, wuxuu ka iibiyay malaayiin ka mid ah albumkiisa on 70. 1983, 250 waxaa lagu qabanqaabiyaa 000 1985 xafladaha Mareykanka. 1989 wuxuu ku qabsaday Gargaarka Lacagta ee Legendary Benefit Live Aid. XNUMX wuxuu ku qabtay Filimada Nabada ee Moscow. Waxay ahayd guutadii ugu horreysay ee dhagax weyn oo ka mid ah xiddiga reer galbeedka ee kuyaala USSR.
Intii lagu jiray kalfadhigii wuxuu soo saaray shan cajaladood. Mid kasta oo ka mid ah ayaa noqday mid badan oo platinum ah oo xaflado badan oo caalamka ah ku leh. 1993, Grammy wuxuu ku guulaystay "Qaybta ugu Fiican ee Muuqaalka" ee "Ma rabo inaan bedelo dunida".
1996 waxay wadaagaan Sharon, xaaskiisa iyo maamulaha hal qof, Ozzfest, oo ah fanaankii ugu horeeyay ee dhagax weyn oo qaran oo qaran si loo raadsado oo loogu sameeyo hibo cusub. Munaasabaddiisa xafladan waxaa booqday 1,4 by a million qof. Ozzfest wuxuu dhacaa sannadkiiba. Qeyb ka mid ah faa'iidada Ozzfest waxay u socotaa ujeedooyin kala duwan, oo ay ku jiraan Lifebeat.
In 2000, wuxuu lahaa xiddigihiisa gaarka ah ee Hollywood Walk of Fame. 2000 waxay heshay Grammy kale ee category Performance Performance (waqtigaan oo ah xubin ka mid ah Sababta Sabtida ee Soonfureed) ee loogu talagalay heesta "Iron Man". Osbourne wuxuu ahaa mucjisada ugu weyn ee muuqaalka dhabta ahOsbournes, kaas oo laga sii daayay MTV.
Iyadoo Sabtida Sabbath ah
Macluumaadka la xidhiidha ayaa sidoo kale laga heli karaa Diyaargarow Sabtida Sabbath.
Maalinta sabtida ee sabtida(1973)
Marna ha dhihin!(1978)
Ka hadal Shaydaanka(1982) - albaabbada guusha
Bark at moon(1983)
Dembiga ugu dambeeyay(1986)
Randy Rhoads Tribute(1987) - albaabbada guusha
Ma lihin kuwa lumay(1988)
Ozzy Ozzy(1990) - albaabbada guusha
Maya ilmo badan(1991)
Live & Loud(1993) - albaabbada guusha
Ozzman ayaa yimid(1997) - Is-ururinta
Down in Earth(2001)
Ku noolaanshaha Budokan(2002) - albaabbada guusha
Ozzy Osbourne(2003) - Is-ururinta
Prince of Darkness(2005) - Is-ururinta
Under Cover(2005) - albaabka ku dabool
Xusuusta Madman(2014) - Is-ururinta
1: Goobo madow (albaab)
2: Hooska dhulka (album, Ozzy Osbourne)
4: Looma nasasho loogu yeeray (Walaaca, Ozzy Osbourne)
5: Blizzard ee Ozz
7: Qaylo (album)
9: Wargeyska Madman
10: Tababar Crazy
12: Barkadda bisha
13: Ma jirto ilmo kale
15: dembiga ugu dambeeyay
16: Isuduwid (albaab, Dub Sabbath)
17: Maalinta sabtida ee Saab, Vol. 4
19: Marna ha odhan!
23: Maalinta Sabtida (song)
24: Qalabka farsamada
26: Maalinta sabtida ee Saab
27: Fikradaha Wareegga Korontada
32: Diiwaanka Jet
35: Dhamaan Came iyo Caaro
36: March bishan
37: Mashruuca Caravan
38: Daboolka hoose
39: Isku-daboolista Sabbath Sabtida
42: Mar labaad ayuu ku dhashay
45: Xubno ku qor liiska sabtida
46: Heerka Fasalka Shaqeeya
Ozzy Osbourne (dhashay John Michael Osbourne, 3. 1948 December Aston, Birmingham) waa gabayaa ee band bir culus British Black sabtida, kaas oo ka koobnaa Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler iyo Bill Ward. Laga soo bilaabo 80. duulimaad 20. qarnigii wuxuu ku shaqeeyaa kali ah oo ganacsi ahaan xitaa ka guuleysta kooxda Black Sabbath. Waxa uu ka mid yahay kuwa ugu caansan, laakiin sidoo kale heesaha dhagaystayaasha ugu murugsan ee hadda.
Roobka madow waxa ka mid ah albumka Ozzy Osbourne oo ka socda 2007. Ozzy Osbourne wuxuu sheegay inuu yahay kan kaliya ee uu qoray oo aan khamriga u qorin. Muuqaalku waa mid cayriin iyo mugdi ah oo leh madow, laakiin sidoo kale waxaa ku jira dhowr ballamad oo uu Ozzy ugu deeqay xaaskiisa Sharon.
Down to Earth waa sheeko darajada 8aad ee 2001 oo heesaha heesaha loo yaqaan 'Ozzy Osbourne'. Waxaa la duubay xilligii 2001 ee Los Angeles iyo soo saaraha Tim Palmer. Qeybaha Jaalliyadaha UK waxay ku guuleysteen sagaal iyo sagaal 200 ilaa kaalinta afraad.
Tribute waa fanaani labaad oo qoob ka ciyaarka ah ee heesaha loo yaqaan 'Ozzy Osbourne'. Waxaa la sii daayay Maarso 1987 by Records Epic iyo Records Columbia waxaana soo saaray Max Norman. Billboard 200 ayaa ku jirta kaalinta lixaad ee jaantuska Billboard 1979, iyo gudaha Maraykanka waxay ahayd laba jeer platinum. Muuqaalkani wuxuu u heellan yahay Randy Rhoads, oo 1982 u ahaa guitarist 1982 ee kooxda Osbourne. Wuxuu ku dhintay shil diyaaradeed kaliya 1980. Maqaalku wuxuu ka kooban yahay rikoodhada riwaayadaha oo laga helayo 1981 iyo XNUMX.
Noqo Raaxaysiga loogu talagalay waa sharafkii shanaad ee Ozzy Osbour oo ah fanaani Ingiriis ah. Waxaa la sii daayay bishii Sebtembar ee 1988 by Records Epic iyo Records Columbia. Soo saarayaashiisa waxay ahaayeen Roy Thomas Baker iyo Keith Olsen. Tani waa qaybta koowaad ee heesaha, kaas oo ay ku ciyaarayeen guitarist Zakk Wylde, oo markii dambe la shaqeeyay sanado badan.
Caalin ee Ozz ee album ugu horeeyay ee studio Solo by Fanaanada biraha culus Ingiriisi Ozzy Osbourne, sii daayay 1980.Track listingSestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - Bass, vocals taageerto, gongLee Kerslake - durbaanada, durbaanka, embriyaha dawanno, tympányDon Airey - ka klávesyznovuvydání 2002Robert ee Trujillo - baskytaraMike Bordin - durbaanada, durbaanka, timpani, gongDanny Saber - embriyaha bellsMark Lennon - vocals taageerto
Magac Osbourne leeyahay shaqsiyad badan: Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne, * 1948) - asal ahaan ah biraha culus Ingiriisi zpěvákSharon Osbourne (* 1952) - xaaskiisa of Ozzy OsbourneaKelly Osbourne (* 1984) - Fanaanada iyo gabadhii Ozzy OsbourneaJeordie White (Jeordie Osbourne White), sidoo kale Twiggy Ramirez (* 1971) - US hudebníkPodobné
Siidaynay waa tobnaad iyo dambeeyay studio album by Fanaanada biraha culus Ingiriisi Ozzy Osbourne, sii daayey June 2010.Seznam skladebSestavaOzzy Osbourne - zpěvGus G - kytaraRob "Blasko" Nicholson - baskytaraTommy Clufetos - durbaanada, durbaanka
Sharon Rachel Osbourne (nee Arden,. * 9 1952 October, Brixton, England, United Kingdom) waa idaaciga Ingiriisi ah, xeer-beege tayo TV show, artist, tababaraha music, bussinessmanka, promotérka iyo Fanaanada culus-biraha dumar Ozzy Osbourne. First in dareenka si dhab mahad dhagaystayaasha yimid tusi Osbournes The, taas oo daba socday nolosha qoyskeeda. Later, iyana waxay noqotay garsoore ee British ah, iyo version asalka ah ee tartanka X Factor iyo versions of American tartanka America ka raadinaya talent.
Qorka ee waalan yahay album labaad studio Solo by Fanaanada biraha culus Ingiriisi Ozzy Osbourne, sii daayay 1981.Seznam skladebBonus on ruuxa ee 20022011 'Legacy Edition' songs 2Všechny disc laga diiwaan on safar of Bilizar Ozz.SestavaOzzy Osbourne - Rhoads zpěvRandy - kytaraBob Daisley - abaalmarinta, Bass, zpěvLee Kerslake - durbaanada, durbaanka, haddana dawan embriyaha, tympányReference
"Crazy Train" waa hees ay heesaan u heestaan ​​Ozzy Osbourne. Waxaa la socday isaga oo ahaa guitarist basis Bob Daisley iyo guitarist Randy Rhoads. Waxaa lagu sii daayay fanaankii ugu horeeyay ee heesaha, Blizzard of Ozz, 1980. Sheekadu waxay ahayd tii ugu horreysey ee albaabka. Daisley wuxuu sameeyey talaabo sharciga 2016 ah oo ka dhan ah Osborne sababtoo ah ma bixin khidmada heesaha. Guitar World ayaa magaceeda ku magacawday "Rhoads 'solo ee heesaha oo ah gabar guitar oo ugu fiican waqtiga oo dhan.
Ozzfest wareeg sanadle ah oo dhowr tobanaan riwaayada (in 2005 - 26) guutooyin in ciyaaro culus Birta, Rock adag, Dhimashada Birta, qoon gaystay iyo Nu Birta, dhigay ee USA iyo Yurub. Abaabulayaasha waa Ozzy Osbourne iyo xaaskiisa Sharon.
Bark at Moon waa album saddexaad oo ka mid ah heesaha heesaha culus ee Ingriiska Ozzy Osbourne, oo la sii daayay bishii November ee 1983. Waa Osborn's kii ugu horeeyay ee albaabbada, oo aan ku jirin guitarist Randy Rhoads, oo sannad ka hor la sii daayay. Qoraalkani wuxuu soo bandhigay guitarist Jake E. Lee, oo ah xubin hore uga tirsanaa Mickey Ratt, Rough Cutt iyo Dio.
Miyuu wax badan ka soo jeedaa waa Ozzy Osbourne oo ah lixda buug ee studio. Diiwaanka wuxuu ka dhacay 1991 ee A & M Studios iyo Devonshire Studios ee Los Angeles, California. Albaabka waxaa soo saaray Duane Baron iyo John Purdell waxaana la sii daayay September 1991 ee Epic Records. By 2000, albumyadu waxay iibiyeen malaayiin koobi oo ku saabsan 4 waxayna heleen afar platinum ah.
Rudy Sarzo (18 November 1950 Havana, Cuba) waa dhagxaan adag oo ah Cuban-American iyo guitarist culus oo culus. Sarzo waxay la ciyaartay kooxo caan ah oo ay ka mid yihiin Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Manic Eden, Dio ama Ördster Cult.
The Ultimate Sin waa galbeedka galbeedka galbeedka oo ah fanaankii ugu horeeyay ee Ozzy Osbourne. Markii ugu horeysay, 1986 waxaa la sii daayay Febraayo by Records Epic. Albaabka waxaa soo saaray Ron Nevison. On Billboard 200, albaabka waxaa loo dhisay dabaqa lixaad.
Reunion waa album a live ah band bir culus ee Black sabtida music British, duubay sanadkii siiyey 1997 poté.Seznam skladebVšechny songs by Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler iyo Bill Ward, haddii jinak.Disk 1 "War Doofaaro" - 8 : 28 "Behind ee Wall of Sleep" - 4: 07 "NIB" - 6: 45 "Jinku xirtaan kabo" - 6: 19 "aaska Electric" - 5: 02 "Sweet Leaf" - 5: 07 "dhise aarayo" - 5: 40 "lagu Hulka ah" - 6: 32 "Snowblind" - 6: 08Disk 2 "sabtida dhiig sabtida" - 4: 36 "orchid / Eebaha Adduunka" - 7: 07 "Dirty Women" - 6: 29 " Black sabtida "- 7: 29" Iron Man "- 8: 21" Children of qabriga "- 6: 30" khayaano "- 4: 28" cilmi nafsiga iyo Man "(Osbourne, Iommi) - 5: 18" Iibinta My Soul " (Osbourne, Iommi) - 3: 10SestavaOzzy Osbourne - zpěvTony Iommi - kytaraG eezer Butler - baskytaraBill Ward - durbaanada
Black Sabbath W. 4 waa magaca heesaha muusikada ah ee ka soo jeeda kooxaha muusigga Black Sabbath ee lagu sii daayo 1972. Albaankani sidoo kale waa shaqo studio ah oo ka mid ah seddexda gabay ee hore, laakin leh akoustics cusub iyo saameynaha dhawaaqa. FX iyo Laguna Sunrise waa qalab kaliya, oo ka duwan inta ka hartay wadooyinka ee ku jira rikoorkaan.
Zakk Wylde, magaca dhabta ah Jeffrey Phillip Wiedlandt (* 14 1967. January, Bayonne, New Jersey, USA) waa guitarist Maraykan ah oo zpěvák.20. May 1987 noqday xubin ka mid ah kooxda taageerada Ozzy, heesaa Black Sabbath.Když in 1993 Ozzy ku dhawaaqay dhamaadka mustaqbalkiisa ciyaareed muusikada, wuxuu go'aansaday inuu ku soo bilowdo oo uu kooxda u gaar ah, Pride nasaha. Kooxda 1994, waxaa la sii daayay albumka Pride iyo Glory. Sano ka dib, Ozzy ayaa ku soo laabtay goobta muusikada, waxaana uu dib ugu biiray kooxda raacsan.
Marna ha dhihin! waa fasalka sideedaad ee studio ee kooxda British Black Sabbath. Si wadajir ah ula wadaagaan albaabka, Farsamada Farsamada waxay ahayd mid aan guulaysneyn sida gabayadii hore ee Black Sabbaths. Sidoo kale waa albumkii ugu dambeeyay ee Sabbath 70. sano iyo ugu dambayntii Ozzym.
Hey Stoopid waa album sagaal iyo studio by Fanaanada American Alice Cooper, sii daayay 1991 July by Records Epic. album ayaa la soo saaray by Peter Collins oo halkan lagu soo bandhigay a guests yar oo ay ku jiraan guitarists Joe Satriani, Steve Vai iyo xariiqda gudban, heesaa Ozzy Osbourne iyo bassist Nikki Sixx.
Curyaamin waa studio album lixaad by guutadii British Black Sabbath.Zpěvák Ozzy Osbourne sanado wareysiyada inta badan ka caban in album this bilaabay jaceeylka la Tony Iommiho duubo studio. Marka la barbar dhigo albums hore curyaamin waxaa laga soo qoray oo si weyn u dheer soo saaray, kaas oo mar noqday kuwa ugu qaalisan ee album lagu duubay (ay album ugu horeeyay ee ku kici dhowr boqol oo mina oo lagu qoro qaaday dhawr maalmood oo kali).
Mike Bordin (* 27 1962. November, San Francisco, California, United States) waa durbaan garaace Maraykan iyo aasaasaha band bir Faith No More waxaa sidoo kale loo yaqaan durbaan garaace ka Ozzy Osbourne ah. Dabeecaddiisu waa dreadlocks iyo gaaban.
"Black sabtida" waa track furitaanka album ah, band bir culus Ingiriisi is-cinwaankeedu Black sabtida Black sabtida, sii daayay 1970 ah. Song by dhammaan xubnaha hore, oo gabayaa ahaa Ozzy Osbourne, guitarist Tony Iommi, bassist Geezer Butler iyo durbaan garaace Bill Ward waxaa soo saaray Rodger Bain.
Fikradda farsamada waa albumka toddobaad ee Black Sabbath. Albaankani waxaa weheliya Marnaba Been! ma ahayn mid guulaystay sida gabayadii hore ee Black Sabbath. Albaabkaan, kooxdu waxay sii waday inay kala soocdo shaqadooda asalka ah ee mugdiga ah; qoraallada daroogada, dhilleysiga iyo transvestites ayaa muuqda. Waxaa jira marar dhif ah jawi mugdi ah. "Rock 'n' Roll Doctor 'iyo' It's Alright '(oo ay heesaan Billar Ward) ayaa aad uga duwan ka soo saarka asalka ee asalka ah. Sidoo kale, tijaabooyinka keybelayaasha iyo qalabixinta ayaa wali ku soconaya xitaa ka badan albumyo hore. Heesta "Waa Gone" waxaa lagu duubay orchestra. Fanaanada Czech Marie Rottrova waxay ku heesatay sheekada "Jacayl, waad qeylaysaa".
13 waa albaabka 19-aad ee studio ee kooxda British-ka ah ee culeyska culus ee Black Sabbath. Diiwaanka wuxuu ka dhacay August 2012 illaa Janaayo sanadka soo socda. Waxaa soo saaray Rick Rubin, 7 ayaa la sii daayay. Juun 2013. Waa albumkii ugu horeeyay tan iyo markii 1995, markii Forbidden la sii daayey iyo markii ugu horeysay ee heesaha Ozzy Osbourne tan iyo 1978 markii Marnaba Been! Saddex ka mid ah xubnaha asalka ah ee kooxdu waxay ciyaarayaan albaabka: guitarist Tony Iommi, guitarist Geezer Butler iyo fanaan Osbourne. Drummer Bill Ward waa dib-u-midaynta kooxaha, waxaana badalaya Brad Wilk, oo xubin ka ah Rage Against the Machine iyo Audioslave.
Black Sabbath waa koox Ingiriis ah oo culus, sidoo kale wuxuu tixgeliyey aasaasaha birta culus, taas oo saameyn ku yeeshay qaabab kale oo badan. Halabuurka asalka ah: Ozzy Osbourne (vokals), Tony Iommi (guitar), Terrance "Geezer" Butler (bass) iyo Bill Ward (drums).
Shirkadda Korantada ee Korontada waa xarun wax lagu duubo oo ku taala Greenwich Village ee New York. Waxa asaasay jameeco Ximium Jimi Hendrix iyo dhismihiisa wuxuu ahaa John Storyk. Waxaa intaa dheer Hendrix, AC / DC, Ozzy Osbourne, Kiss, Blondie, Patti Smith, The Clash, Magnetic Fields, Mike Oldfield ama Nas ayaa duubay diiwaankani.
Kelly Michelle Lee Osbourne (* 27 October 1984 London) waa fanaan Ingiriisi ah, gabadha caanka ah ee Ozzy Osbourne. Waxay soo saartay saddex muusik oo ah muusikada muusikada ah.DiskografiShut Up (2002) Isbedelada (2003)
Don Airey (* 21. 1948 June, Sunderland, England) waa ciyaaryahan keyboard British, kuwaas oo tan iyo 2002 ciyaara ee kooxda dhagax Deep Purple, bedelida Jon Lorda.Tvoří iyo guuro goobta music sanado badan, la kaashanaya muusiikaystayaal Gary Moore, Ozzy Osbourne, Yuudas Wadaadka, Black sabtida, Yetroo Tull, Whitesnake, Colosseum II, oo dambiila ah, Michael Schenker, Uli Jon Roth, Rainbow, jagode divlje iyo Cod dheer noolaanshaha, sidoo kale gacan saar la leeyihiin Andrew Lloyd Webber.
Ozzmosis waa Ozzy Osbourne oo ah muusigga toddobaad ee studio. Its duubo dhacay sanadkii la soo 1995 daraasaad Guillaume sheeg Studios (Paris, France) Xuquuqda Track Rikoodh (City New York, New York), Bearsville Studios (Woodstock, New York) iyo Electric Lady Studios (New York City, New York) inta lagu jiro. soo saare Album Michael Beinhorn iyo heestii la sii daayay in 1995 October by Records Epic. Heerka Boqortooyada Ingiriiska ayaa lagu meeleeyay 22. meel iyo Maraykanka oo ku jirta kaalinta afraad. Alba ayaa ka iibisay in ka badan laba milyan oo nuqul oo ay ku guuleysteen laba platinum.
Tommy Aldridge (* 15. August 1950) waa dhagax adag iyo biraha culus durbaan garaace Maraykan ah, ugu horrayn loo yaqaan xubin ka mid ah Black Oak Arkansas, Pat Travers Band, Ozzy Osbourne, Gary Moore, Whitesnake, Ted Nugent iyo hadda la khafiif Lizzy ciyaaro.
Diiwaanka Jet wuxuu ahaa shirkad yar yar oo daabacaadda muusikada Britishka ee 1974. Gurigaan daabacan, albaabadooda ayaa waxaa sii daayay Electric Light Orchestra (ELO), Roy Wood, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Riot, Magnum iyo kuwo kale.
Rob Trujillo (* 23 Oktoobar 1964) waa ciyaaryahan kubadeed oo Mareykan ah. Wuxuu haatan ku ciyaaraa kooxda Metallica. Wuxuu horey u soo ciyaaray Tacliinta Suicidal, Grooves Infected, Society Label Society, iyo kooxda kooxda Ozzy Osbourne.
Jimmy DeGrasso (* 16 Maarso 1963 Bethlehem, Pennsylvania, USA) waa qoryaha waawayn ee Maraykanku leeyahay. Sanadihii 1986-2001 ayaa la ciyaaray Y & T. Wuxuu sidoo kale xubin ka ahaa Megadeth (1998-2001), Dokken (2012), waxaanay shaqeynaysay dhawr sano oo ka tirsan Alice Coopera. Maadaama 2012 uu xubin ka ahaa shirkadda Black Star Riders. Waxa kale oo uu la shaqeeyay muusikada sida Ozzy Osbourne, Tendencies Suicidal iyo David Lee Roth.
Dhinacyada timid Spider waa album shan iyo labaatanaad studio by Fanaanada American Alice Cooper, sii daayay 2008 iyo mar kale in songs 2010.Seznam "gogol / aan ogayn Aad ku Nooshahay" (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 21 "Aarsasho anigaa leh" (& xarriiq) (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 26 "Toos u dhintay" (& Ozzy Osbourne) (Cooper, Osbourne Saber) - 3: 53 "Me Qabo Haddii Aad karaa" (Cooper, Saber, Hampton) - 3: 15 "(in Touch leh) Your haweenka Side" (Cooper, Garric, Johnson, Kelli) - 3: 16 "duudduubay Silk" (Cooper, Saber, Hampton) - 4: 17 "dilay By Love" (Cooper , Garric, Bacchi, Kelli) - 3: 34 "waxaan ahay gaajoodeen," (Cooper, Saber, Hampton) - 3: 58 "Mid ka mid ah ayaa iska haysataa" (Cooper, Kelli, Jani Lane) - 3: 21 "Badbaado" (Cooper, Saber, Hampton, Fowler) - 4: 36 "waxaan ahay Spider / Epilogue ah" (Cooper, Saber, Hampton) - 5: 21SestavaAlice Cooper - vocals, taageerto zpěvDanny Saber - gitaarka (XNU MX 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 iyo 10); gitaar Slide (11); EBow (4); Bass (4, 1, 3, 6, 8 iyo 10); biyaano (11); Furayaasha (7, 1, 3, 6, 7, 8 iyo 10); synthesizer (11); qabanqaabada string (4 iyo 10)
March Marti Die waa 10. albaabada studio ee kooxda biraha adag ee ingiriiska ah ee Motörhead, oo laga duubay London bishii Maarso 1992. Waxay muujinaysaa awoodda saddexda guitar - Würzel, Lemmy, Zööm. Kooxdu waxay sii daayeen hal mar March ör Die, oo lagu soo gabagabeeyay 20. meel ka mid ah jaantusyada Ingiriiska ee ka dambeysa fannaanka gabayga Angel of the Gambler ka Iron Iron ka 1993. Hal cunug, Cat Scratch Fever iyo Hellraiser ayaa laga sii daayey saaxiibkii Oscar-Lemmy iyo saaxiibkiisa Motorhead's saaxiibkiis Ozzy Osbourne.
Qorshaha Caravan waa sheeko maskaxeed oo ka soo jeeda kooxda Ingiriiska ee Black Sabbath. Qoraalka iyo heesaha gaarka ah wuxuu abuuraa jawi riyo ah; Qaab-dhismeedka iyo mijana ayaa Kudayasho aan joogto ahayn iyo midabkiinaba muujinayaan ifafaale jidhadhka dhulka iyo astrophysical kala duwan, sidaas darteed waxaa loo kala saari karaa sida dhagaxa weyn meel u eexan. U muuqday on album horumar degdeg ah khayaano ah 1970 oo inkasta oo ma fiirsan hit Black sabtida, lagu ciyaaray by guutadii American Pantera, kuwaas waxaa ka mid ah uu album Far Beyond Dadka degani.
band bir culus British Discography Black Sabbath.Oficiální discography skupinyStudiová albaMnoho iyaga ka mid ah (8 hore Ozzy iyo labada ugu horreeya la bedidda) waxaa loo arkaa Classics biraha. Qaar badan oo kale (badanaa Haddana iyo albums dhashay la Tony Martin) waa mid aad u kultovní.Koncertní albaKompilační albaNeoficiální / diskografieTyto albums kale aan rasmi ahayn - aan la soo saaray maamulka iskaashi členů.1980 - Degganaanta Last (1973 - Iommi, Osbourne, Butler, Ward); #5 UK. Ugu dambayntii remastered oo si rasmi ah la sii daayay mid ka mid ah laba saxannada hore Lives.1977 - Greatest Hits. Ma aha in la sii daayo a Greatest Hits 1970-1978, tani waa isku duwidda xogta ka mid ah toban kuwan raadkaygay qaybta ugu horeysay ee shan albums Pieter Brueghel Elder ee "El triunfo de la muerte" sida baakadaha.
Mick Wall (* 23 June 1958) waa muusigga muusiga ah ee muusikada, raadiyaha iyo telefishinka iyo qoraaga. Wuxuu xirfadiisa ku bilaabay 1977 loogu talagalay magalada Geneva. 1983 wuxuu bilaabay inuu u qoro Kerrang! Later, wuxuu ku diiwaangashan yahay sidii looyaqaano farshaxan badan oo dhageysta sida Ozzy Osbourne, Status Quo, Led Zeppelin, Iron Maiden, Guns N 'Roses ama Metallica.
Lee Kerslake (* April 16. 1947 in Bornemouth, Dorset, UK) ahaa durbaan garaace ugu dheer ciyaareed ee band dhagax weyn kooxaha Uuriyaah Heep.Do soo biiray bishii November 1971 ah, 1979 ka fariistay ee October oo mar kale April 1982 galay. Dhab ahaantii ka tago guutadii sababo caafimaad ee 2007. Ka hor inta mudada Uuriyaah Heep xubin ka mid ah ilaahyada ahaa. Waxa uu u ciyaaray on albums Solo xubnaha Uuriyaah Heep Ken Henslyho iyo David Byron. In sano ee 1979-1982 sameeyo albums la Black sabtida iyo Ozzy Osbourne. Wuxuu ka shaqeeyey sidii muusikiiste studio ah, oo ay la socdaan bassist Bob Daisleyem on Ozzy ee albums Bilizar of Ozz iyo qorka ee waalan iyo qaab dambe noqday mawduuca u dhaaranay, iyaga iyo Ozzy Osbourne dhexeeya.
Mar labaad baa ku dhalatay albaabkii Sophia Dayton Sophia. Waa kaligii albaabka Ian Gillan, oo ahaa fanaankii hore ee Deep Purple. Sidoo kale, Bill Ward ayaa ku soo laabtay boostada daraasadda. Albaabka ayaa ka mid ah taariikhda ugu fiican ee taariikhda kooxda. Dhibaatada ayaa la jaray waqtigii la sii daayay laakiin waxay gaartay 4. Meelaha ku yaal UK, taas oo ah heerka rasmiga ah ee UK, iyo Maraykanka waxay gaartay 40 sare.
Bill Ward (dhashay William Thomas Ward, 5. May 1948, Aston, Birmingham, England) waa durbaan garaace ee band halyeeyga biraha culus British kooxda Black Sabbath.Ve ciyaaray fuusto tan iyo markii la aasaasay ee 1969 in 1980 u gashaan oo u gabyi Solo laba kuwan raadkaygay ka Black sabtida; "Waa hagaag," (album Technical Ecstasy), iyo "dharbaaxay Chain The" (album Marna waxaad dhahdaa ku dhinta!).
Dub Sabbath waa kan ugu horreeya ee studio ee kooxda Britishka ee isla magaca. Waxaa la sii daayay Jimcihii, Seddexaad (13, February). Dhaleeceyn badan, albaabkan, gaar ahaan jihada cinwaanka, waa rikoodhka ugu horreeya ee macdanta. Saameynta Led Zeppelin, badanaa blues, ayaa sidoo kale cad. Album 2003 ayaa gaartay 238. Qiimaynta 500 ee albumska ugu fiican ee waqtiga oo dhan ee majaladda Rolling Stone. Sida laga soo xigtay guitarist iyo aasaasaha Black Sabbath Tony Iommi, kooxdu waxay ku diiwaangashatay albaabka hal maalin 16. Oktoobar 1969.
Sida laga soo xigtay nástrojeZpěvOzzy Osbourne (1969-77, 1978-79, 1985, 1997-2006, 2011-jooga) Dave Walker (1977-78) Ronnie James Dio (1979-83, 1991-92) Ian Gillan (1982-84) David Donato (1984-85) Glenn Hughes (1985-86) Ray Gillen (1986-87) Tony Martin (1987-91, 1992-97) Rob Halford (1992: mid riwaayad, 2004: Ozzfest) KytaraTony Iommi (1969-2006, 2011 ah, weli) BaskytaraGeezer Butler (1969-85, 1991-94, 1997-2006, 2011-jooga) Dave Spitz (1985-86, 1987) Bob Daisley (1986) Jo Burt (1987-88) Laurence Cottle (1988-89) Neil Murray (1989-91, 1994-97) KlávesyGeoff Nicholls (1985-91, 1992-97) fuusto Bill Ward (1969-1980, 1982-83, 1984-85, 1994, 1997-98, 1999-2006, 2011- 2012) tartaric Appice (1980-1982, 1991-92, 1998) Bev Bevan (1983-1984, 1987) Eric Singer (1985-1986) Terry ogashahay (1987-1988) layareeyo Powell (1988-1991, 1994-95) Bobby Rondinelli (1992-1994, 1995-97) Mike Bordin (1997) Tommy Clufetos (xNum Articles X-jooga) la xiriira
Working Class Hero (Czech shaqeeya geesi class) song John Lennon ayaa ka album ugu horeeyay ee John Lennon / caaga Oonoo Band ka dib markii weyni ee Beatles.Cover verzePíseň waa mid aad loo jecel yahay sida versions cover: band David Bowie ee Tin MachineCyndi LauperRoger TaylorMarilyn MansonNoir DésirOzzy OsbourneManic Street PreachersGreen DayScreaming TreesExterní songs odkazyText turjumay Czech
The Master of Reality waa albaabka saddexaad ee ka tirsan kooxda caanka ah ee Britishka ah ee culeyska culus ee Black Sabbath la sii daayay 1971. UK, 5 ayaa gaartay. Guud ahaan gabaygani Tony Iommi ayaa markale dib u hagaajinayey guitarkiisa iyadoo sadex goor ay hoos u dhigtay Ci si loo yareeyo xargaha, farahiisa dhaawacmay ayaa dareemaya wanaag. Thanks to this, codka qotodheer iyo "dhoobo" ayaa calaamad u ah albumkan.
Canshuurtiisii ​​ka go'dayna waxay noqon kartaa: gabbaro (album, Paul Motian) - durbaan garaace album Paul Motian (1974) gabbaro (album, Ozzy Osbourne) - album ah oo gabayaa Ozzy Osbourne (1987) gabbaro (album, Keith Jarrett) - album of biyaaniiste Keith Jarrett (1989) gabbaro (album, Roy Rogers) - durbaan garaace album Roy Rogers (1991) gabbaro (album, Yanni) - muusikiiste album Yanniho (1997) gabbaro (album, Emilie-Claire Barlow) - album ah oo gabayaa ahaa Emilie-Claire Barlow (2001)
John Robert "Bob" Daisley (* 13 1950. February, Sydney, Australia) waa muusikiiste Australian, bassist iyo lyricist kuwaas oo gacan saar la leeyihiin Ozzy Osbourne, Uuriyaah Heep ama Gary Moore. Waxa uu haatan u ciyaaraa la guutadii Cod dheer noolaanshaha.